Shalọ ọrụ mkpuchi anwụ - China Sun Shade Manufacturers, Suppliers
170T / 190T / 210T Polyester Car Sunshade nwere Logo mbipụta maka ihu windshield n'ihu SS-D-1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249 Thekwà ahụ bụ ọla ọcha nke nwere ike igosipụta ìhè anyanwụ na UV iji nweta mkpuchi ọkụ n'ụzọ dị irè belata okpomọkụ na ụgbọ ala iji chebe ime nke ụgbọ ala site na ịka nká. Ọrụ: 1. Mfe itinye na windo na ndị na-a sucụ ara. 2. Lower n'ime okpomọkụ ma chebe ime ụgbọ ala. 3. Agba nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa si askmen ...
Afọ Pee ihe nkiri anwụrụ ọkụ na usoro dị iche iche
Car sunshade maka windo ihu / afụ n'ihu windo ndo / afụ Sunshade / Pee afụ na-ebi akwụkwọ ụgbọ ala anyanwụ ndo
Laser film ahaziri anyanwụ ndo SS-61520/24
Laser film compounding akwụkwọ panel + 1.5mm EPE ụfụfụ anyanwụ ndo Car sunshade maka n'ihu window / laser n'ihu window ndo / laser Sunshade Item Laser Film Car Front Windshield Shades Brand Name: OEM Model Number: SS-61520/24 Ihe Laser film kaadiboodu na EPE ụfụfụ Size 130 * 60CM / 140 * 70cm, ma ọ bụ ahaziri Agba Sliver ụgbọ ala anyanwụ ndo Nkwakọ ngwaahịa ahaziri MOQ 1000pcs na ụgbọ ala anyanwụ ndozi Ọrụ: 1. Anti-UV nchebe na ìhè anyanwụ na-egosipụta iji wedata n'ime temperatu ...
Car Sun Onyunyo N'ihi Akụkụ na N'azụ Window SS-M-61501 / 2/3
Ahaziri na OEM / ODM Car Sun Ikebe N'ihi Side na N'azụ Window
EPE ụfụfụ anwụ na-acha SS-61501 / 2/3/4/27
2mm Silver EPE amfụfụ n'ihu windo foldable Sunshade nwere agba ihe nkiri aluminium / Black Pu akpụkpọ anụ / Ihe nkiri na-acha anụnụ anụnụ
Fan-ekara Retractable Rolling Sun ndo SS-61535
Fan-ekara Retractable Rolling Sun ndo Car Sunshade / Fan ekara / Rolling Sunshade / Retractable / Cuttable Imewe nke aluminom film na onye ofufe ekara mpịachi nwere ike n'ụzọ dị irè na-egosipụta ìhè anyanwụ; Wụpụ ya mgbe ejiri ya mee ihe ma wepụ ya mgbe ọ na-ejighị ya, ọ na-ewe 1 sekọnd, ọ dịghị mkpa ka ị weghachite ya ugboro ugboro; Enwere ike belata ya dịka nha na ọdịdị nke ikuku ụgbọ ala gị.
Umbrella anwụ na-acha SS-61536
Nche anwụ sunshade Ihe: Titanium ọlaọcha teepu + nchara nche anwụ ọkpụkpụ + PVC wuru akpụkpọ anụ Car Sunshade / Fan ekara / Telescopic nche anwụ ụgbọ ala sunshade / Retractable / Cuttable 1. Better okpomọkụ mkpuchi mmetụta; 2. Nche anwụ retractable, anyanwụ nchebe oyi akwa, ọ dịghị mkpa ka ịwụnye; 3. Gbanwee ọgịrịga concave, nchekwa dị mma ma na-adịgide adịgide.
Car Wine oyi, Carlọ Ulo Ugbo Ala, 12v Car Igwe nju oyi oyi, Mako Car oyi, Obere igwe oyi 12v, Kpuchie N'okpuru Car,